The Somali Dir Clan's History: Codka Beesha Direed: Xeer Beegtii Beesha Suure Dir- ee 800 sano ka hor xeer hoosaadyadoodii
Xeer Beegtii Beesha Suure Dir- ee 800 sano ka hor xeer hoosaadyadoodii
Waxaa Moodaa Markaa Maqasho Xeer Beeg Ama Guurti .Isla Markaaba inaa soo xasuusanayso beelweynta direed Dadka ku abtirsada somali waxa xeer udegsan dhamaantiis waa xeerarkii ay horay noogu dejiyeen cuquushii direed ee horeysay
Xeerbeegtida garta wexey u kala saaraan:Curad – gar horey loo xaliyay oo akhyaartu kasto iyo mid lama arag ah oo ay Ugub u yeeraan. Precedence or novel.
“weelasha lagu missaamo hadhuudka waatan dhahno waxa baa lagu beegaa. Heer kul beege- therometer garta beega ama misaama
Xissi – xeer aasaasi ah oo tarikhiyaan soo jireen ahaa oo an lagaba doodi karin, leyskuna raacsan yahay kor iyo hoos bulshadoo idil.
Dilka – Qudha
” Mahamaah: Misko la koro miskiin baa leh, ” ayay somalidu tidhi, ayagoo u jeeda qofku hadii uu tabar daran yahay wax taageero ah na haysan yaa difaacaaya.
Dirka, konfurta waxa ay sheegan odeyga Direed wiilkiisa Maahe Dir in uu arinkaan ka gubtay, kadib markii uu arkay in mar walba ay dulmanayaasha yihiin kuwa ugu xooga yar Somalida. Waxaa uu ku jawaabay maadama Weyn, Abuurah iyo uumah ifka uu xaq soorah runta ah yahay oo uu si un ugu aaro ka daciifka ah ee uu isagu uunto. Waxaa la yiri muddo dhoor iyo toban sano kadib ayuu soo kacay aroor oo uu yiri, ” Nabsi ayuu weynuhu adeegasadaa”, oo si uun baa loo ciqaaba kii tabar yarah Dhib. Waxaa la yiri, gabey iyo guubabo ayuu ku fidiyay fikradaan Nabsiga. I uu Illahey si toos ah oon lex lexad leheyn uu ugu aaro adoontiisa tabarta yar. Waa ” Waa waxa la dhihi karo ” instant Divine Retribution” ciqaa xaga illahey uga timaada kuwa dhiba masaakinta, tabar ta yar. Mahe Dir wuxuu wiilkiisi curad ka ahaa u baxshay Xiniftire- ama mid isku tax luujiyo inuu la dagaalamo xanuunka xaq darada la xiriira, Xinif-Tire (Xanuunkaa bi’iye) sida dadka waa weyn siiba Habraha madhaleyka, ruux kasta oon tabar iyo xeelad uu isku difaac leheyn, dadka laga tiro badan yahay, Kuwa safarka ah, agoonta, iyo kuwa maskaxda looga jiro ( Waalan ama Maraanka ah)
Nin oo Diraa, hada ka hor wuxuu ku sifeyn jiray Somalida jirta Samankan Cayayaan, Xasharaad, iyo wax lamida maalin ayaan ku dhahay, ” adeer maxaa u dhadaa Somalidu waa cayayan”, ?
Wuxuu yiri: Somalidii hore ee Aji dad san oo hagaagsan ayay ahayeen, waan saabata ilaahey ugu baxshay ” Samaale” Kuwii samada lahaa. Samaalahana waxaa ugu fiicnaa Dir Aji oo waa ninka alifay kalgacalka, Sinaanta, iyo in si wad jir ah oo san in ay u wada nooladaan. Laakin waxaa Dhacday Dir Aji waxaa ku qasmay cayayan iyo xasharaad fara badan, dunta hoosena waa ka xumaadeen oo xeerkii iyo hidih Dir Aji uu ku faafiyay Geesta afrika waa baa ba;ay.
Posted by DIRSAME at 9:40 PM
Xeer Beegtii Beesha Suure Dir- ee 800 sano ka hor ...